Weliga ma aragtay xildhibanadan oo keenay Barlamaanka dood ku saabsan degaankooda? - Latest News Updates
Weliga ma aragtay xildhibanadan oo keenay Barlamaanka dood ku saabsan degaankooda?
Weliga ma aragtay xildhibanadan oo keenay Barlamaanka dood ku saabsan degaankooda?.. Sababtuna maxay tahay?
Dunida hormartay caruurta ku dhalatay lix bilood markay gaaraan ayaa loo bilaabaa aqriska buugaagta sheekooyinka, ka dibna marka la geeyo xanaanada Skuulka, sanadka ugu horeeyaba waxay noqdaan kuwo wax aqriskooda fiican yahay.
Carurtaas markay 7 sano gaaraana waxay maalintii aqriyaan afar boqol oo page, markii Tv-yada la hor keenana waxaa suurta gal ah inay hadalka haleeli og yihiin iyagoon argagixin ama ay dowladooda u soo bandhigi karaan dareenkooda siyaasadeed ee kaga aadan degaankooda iyo wax barashadooda.
Intaas ka dib ma og tahay in 82 tuulo ee hoos yimaada Degmada #Balcad ay bil waliba ku Umul raacdaan in ka badan 20 dumar ah Isbitaal la’aan?..yaase ugu maqan xaquuqdii ay dowlada ku lahayeen inay Isbitaal u dhisto?
Mise kula tahay nin aan weligiis aqrinin 5 baal oo ka mid ah dastuurka dalka inuu Barlamankiisa u soo bandhigi karo dood ku saabsan duruufta deegaankiisa.
Aniga waxay ila tahay in xildhibanadaani ay raadsadeen mas’uuliyad aysan maskaxdooda xamili karin…. taas ayaana cadeeyn kuugu filan inay yihiin kuwa sababay dib u dhaca wada naafeeyey dadkooda iyo degaankoodaba.
Xarbi Cali Raage